Global Voices teny Malagasy » Resaka Tamin’i Nina Ansary, Mpanoratra Mpivohy Ny Miralenta, Ny Harivan’ny Fiovàna Tany Iràna · Global Voices teny Malagasy » Print
Resaka Tamin'i Nina Ansary, Mpanoratra Mpivohy Ny Miralenta, Ny Harivan'ny Fiovàna Tany Iràna
Voadika ny 16 Aogositra 2015 13:03 GMT 1	 · Mpanoratra Mahsa Alimardani Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Ity no lahatsoratra fahatelo tamin'ilay andianà resadresaka tamin'ilay Iraniana mpanao gazety sady mpanoratra izay nanokana ny asany ho fampitàna ny fahasarotana sy ny fifanoherana misy any Iràna ho an'ireo izay any ivelan'ny firenena. Vakio miaraka amin'i Golnaz Esfandiari  ny voalohany,  miaraka amin'i Kelly Golnoush Niknejad  ny faharoa. 
Alahady 12 Jolay 2015 tamin'izay, ilay alina nialoha an'ilay noheverina ho andro farany tamin'ny fifampidinihana tany Vienne. Fara faha-keliny nandritra ny iray volana izaho sy Nina Ansary  no nanandrana nandamina antso an-telefaona iray tamin'ireo hasin'ora vitsivitsy samy hafa.  Farany, tafaresaka ihany izahay ny omalin'ny andro izay noheverin'ireo solontenam-panjakana mpivory ho andro farany amin'ny fifampiraharahàna tany Vienne momba izay hoavin'i Iràna.
Vitsy ireo fandalinana izay nanao fandraisana anjara mendrika tamin'ny resaka maha-lahy sy maha-vavy any Iràna — singanina manokana amin'izany ny Sexual Politics in Modern Iran ( Ny politika momba ny maha-lahy na maha-vavy ao anatin'i Iràna maoderina) an'i Janet Afary, sy ireo lahatsoratra maro sy ireo boky izay mirona mankany amin'ny andraikitry ny miralenta amin'ny revolisiona Iraniana nosoratan'i Haideh Moghissi. Saingy na dia tsy ny voalohany aza ilay ezaka nataon'i Ansary, dia ny Jewels of Allah ( Firavak'i Allah) : Ireo Tantaram-Behivavy tsy notantaraina any Iràna no boky voalohany mandrakotra ireo hetsika ara-politika tariham-behivavy nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 ka hatramin'izao. Mirakitra fandalinana tranga sy famaritàna amin'ny antsipirihany ny hetsika toy ny fivoaran'ny fanabeazana ny vehivavy nandritra ny vanim-potoanan'i Pahlavi sy Silamo, ary ny Asa fanaovan-gazety mivohy ny miralenta tamin'ny faran'ny taona 90 ilay boky. Samy nanambatambatra ny tantaran'ny vehivavy, saingy amin'ny fomba roa samy hafa ny vakiteny ara-tsosiolojian'i Janet Afary sy ny fandalinana ny hetsi-bahoakan'i Moghissi. Fampidirana matotra ho an'ireo mpankafy rehetra mitady ny fomba fijery ankapobeny momba ny miralenta any Iràna maoderina ny bokin'i Ansary.
Ny fomba fanandratan'i Ansary ireo hetsika sasany manan-tantara no zava-baovao entin'ilay boky. Toko iray manontolo tamin'ilay boky no natokany ho an'i Shahla Sherkat, tonian-dahatsoratra mpikatroka mafana fo izay niady ny hitazonana ny Zanan, gazety boky tranainy indrindra amin'ny fampahafantarana ny miralenta any Iràna, sisa tavela nandritra ny fanerena hihidy sy ny hafetsena miafina ara-politikan'ny andron'ny fanavaozana ho amin'izao fitantanana nohavaozina izao. Tamin'ny fanokafana varavarankely mitodika amin'ny asan'ireo vehivavy Iraniana amin'izao fotoana izao, asehon'i Ansary fa azo atao amin'ny endrika sy ny habe rehetra ny miralenta. Azo atao, ohatra, ny manao ny hany vehivavy mpamono afo any amin'ny tanàna Iraniana lavitra, na — tahaka ny fandalinana ny tranga Sherkat — amin'ny endrika mpanao gazety mihantsy ny fadim-piarahamonina mba hizaràna ny asan'ny hetsika miralenta manerantany.
“Samy manan-jo hamaritra ny teny famerimberina hoe miralenta araka ny fahitany azy ny tsirairay, ” hoy i Ansary tamiko nandritra ny resakay . ” Tsy maintsy araka ny zava-misy ara-kolontsaina any aminy no namaritany ny miralenta”
Ny tanjon'ny bokin'i Ansary izany dia ny mba hahafahantsika mahafantatra ny fomba namolavolan'ireo vehivavy ny tantara vaovaon'i Iràna, ary mbola tohizany izany, amin'ny filofosany hametraka ny zony sy ny miralenta ao anatinà fiarahamonina iray izay efa nentim-paharazana tao ny fanaovana azy ireo an-jorom-bala.
Ansary izy tenany dia nobeazina avy amin'ny fototra iray nandray anjara mavitrika tamin'ny politika Iraniana. Nandritra ny revolisiona, nandao an'i Iràna niaraka tamin'ny fianakaviany izy fony teo amin'ny faha-12 taonany. Mpikambana tao amin'ny governemantan'i Shah izay voaongana ny rainy. Zavatra nahagaga ahy izany, satria tsy niaty ireo fandrika ideolojika mahazatra izay miezaka mampidi-kizo ireo izay mandalina momba an'i Iràna ny Jewels of Allah. Tsy manohana na miaraka amin'ny fitondrana izay mitantana i Ansary hatramin'ny Revolisiona Islamika : ” Tsapako amin'ny fihetseham-poko fa misy fifandraisana lalina amin'ny tany nahaterahako aho” hoy izy tamiko, ” fa ny efapolo taona farany……. loto sy rahona maizina mandrakotra ny tena Iràna io fitondrana io.” Fa na izany aza, tsy hita mihitsy ao anatin'ilay boky ny fanasongadinana ny miralenta tamin'ny andron'ny Phalavi. Raha ny marina dia ny manodidina ny miralenta mifanaraka amin'ny aingam-panahy Islamika taorian'ny 1979 no votoatin'ny bokin'i Ansary.
“Manan-trosa amin'ireo paosy maro samihafan'ny tantara ny aingam-panahy nivoaka avy amin'ny vehivavy any Iràna amin'izao fotoana izao. Karazana paosy izay nahafahan'ireo vehivavy namoaka ny feony izany,” hoy i Ansary nanazava.
Nahoana no ampifandraisiko ny bokin'i Ansary sy ny fifampiraharahana nokleary vao haingana ? Mazava ho azy fa noresahanay io resaka io rehefa niresaka izahay ny hariva mialoha ilay fetra andro farany.
“Avy aminà fomba fijery tena mijery ny maha-olona no ijereko azy io” hoy i Ansary. ” Tsy misy ifandraisany amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy sy ny olana hafa momba ny zon'olombelona ireo fifampiraharahana ireo. Fa na izany aza, nampivalaketraka ny ankamaroan'ny mponina ilay sazy amin'ny ankapobeny, ary inoako fa raha misokatra ny iray, hisokatra koa ny varavarana hafa… hahatonga ny fitondrana hahatsapa tena ho tompon'andraikitra manoloana izao tontlo izao izany, mohoatra lavitra noho ny olana ara-nokleary fotsiny. Fa raha esorina ho any ivelan'ny kajy ny fitondrana ankehitriny, dia arahabaiko ny fiovàna ho an'ny vahoaka Iraniana”.
Ary ny heviny momba ny ho avin'i Iràna sy ny toeran'ny vehivavy ao aminy ?
“Fanantenana somary arahana fahamalinana ihany …. satria hitako fotsiny ny fahafahan-dry zareo miaritra. Ary izany dia satria nahazoana ampaham-bokatra ny hafanam-pom-behivavy : Tsy mahazo manao asan'ny mpitsara ny vehivavy, saingy afaka manao mpitsara mpanao famotorana izy ireo amin'izao fotoana izao. Misy sampam-pianarana izay tsy azon'ny vehivavy nidirana, fa rehefa ela ny ela dia afaka miditra amin'ny sampana natokana ho an'ny lehilahy toy ny fianarana ho mpitsabo sy fianarana ho injeniera ny vehivavy. Manantena aho saingy malina, ary mino fa ho lohalaharana amin'ny fiovàna rehetra any Iràna ny vehivavy.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/08/16/72398/
 Golnaz Esfandiari: https://globalvoicesonline.org/2015/03/24/an-interview-with-golnaz-esfandiari-english-language-journalisms-bridge-to-iran/
 Kelly Golnoush Niknejad: https://globalvoicesonline.org/2015/05/11/how-kelly-golnoush-niknejads-tehran-bureau-bridges-iran-and-the-west/